Dai 5, 2021 by Justin26
Kuti uwane zvakanyanya kubva zvako Imba yeGoogle, Nest Audio, Mini Mini, Nest Mini, Kumba Max, Nest Hub kana Nest Hub Max, isu takamisikidza sarudzo yemazano epamusoro uye matipi ekukubatsira kugona matauri-akaomeswa maspika uye ekuratidzira pasina nguva.
Google Kumba / Nest matipi akajairika uye madiki
Chinja kunzwisisika kweGoogle Hey
Iwe unogona kusimudza kana kudzikisa Google Kumba uye Nest zvishandiso kunzwisisika kuti zviite zvakanyanya kana kushomeka kuteerera kune "Hei Google" mazwi ekumuka.
Vhura iyo Google Home app> Tinya pane Kumba tebhu muzasi kuruboshwe> Vimba pane chimiro icon mukona yepamusoro kurudyi> Mubatsiri Zvirongwa> "Hei Google" kunzwisisika.
Vhura iyo Google Kumba app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tinya pane Wedzera icon> Tapira Wedzera munhu kumba> Nyora zita kana email kero yemunhu waunoda kuwedzera> Simbisa.
Chinyorwa cheNhengo dzeKumba chichaonekwa pano. Tinya pazita remunhu wacho> Dzvanya madota matatu kurudyi kwezita ravo> Dzvanya pabhini iri kumusoro kwekona yekurudyi> Tapira Bvisa, kana iwe uchida kudzosera mukana. Iwe unogona kuona izvo zvishandiso izvo nhengo yemumba inokwanisa kuwana pano nekukanda paDhivhidhi Yekuwana.
Iwe unogona zvakare kuwedzera Nhengo Yemumba pano zvakare nekukanda pa "+ Koka Munhu" pasi pechinyorwa.
Maitiro ekumisikidza Mhuri Bhero
Iwe unogona kuronga zvinodaidzwa neGoogle Mhuri Mabhero ayo ari echinyakare mabhero ekuzivisa zviitiko zviri kuuya kumhuri yako pane yako Google Kumba uye Nest zvishandiso. Semuenzaniso, unogona kugadzira bhero kuudza munhu wese wemumba mako kuti apedze mabasa avo na5PM.
Vhura iyo Google Home app> Tinya pane Kumba tebhu muzasi kuruboshwe> Vimba pane chimiro icon iri kumusoro kurudyi> Mubatsiri Zvirongwa> Mhuri Bhero> Wedzera Bhero> Pinda chiziviso cheBell uye nguva> Sarudza mazuva api aunoda kudzokorora. iyo bhero> Sarudza iyo Google Kumba / Nest chishandiso kuridza bhero pa> Gadzira Bell.
Kana iwe ukamisa Google Home nyowani kana Nest chishandiso, iwe uchafanirwa kugadzira "Imba" yekuisa mukati. Izvi zvinokubvumira iwe kuti uwedzere akasiyana akasiyana majaira kune iyo chaiyo imba, kana imba nyowani, kutumidza yega yega Imba iwe gadzira kuti zvive nyore kusiyanisa pakati pekuwedzera pazviri.
Kuti uchinje zita reimwe ye Dzimba dzako> Vhura iyo Google Kumba app> Tinya pane Kumba tebhu muzasi kuruboshwe> Tinya pane zvigadziriso cog pasi pezita reimba iwe yaunoda kuchinja> Dzvanya paImba Ruzivo> Imba Nickname> Chinja zita> Sevha.
Kune avo vane rombo rakanaka kuti vanaro akawanda Google Kumba kana Nest zvishandiso, unogona kugadzira boka remutauri nezvose, kana akasarudzwa Kumba / Nest zvishandiso. Iwe unogona ipapo kubvunza Google Mubatsiri kuti aridze mimhanzi kubva kune iwo maspika uye zvinokwanisika kutumidza chero mapoka zvakare.
Vhura iyo Google Home app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tinya pane "+" icon kumusoro kumusoro kuruboshwe> Dzvanya paGadzira Mutauri Boka> Sarudza iyo Google Kumba / Nest zvishandiso zvaunoda kugadzira yako boka> Zita iro Boka> Sevha.
Haasi ese maratidziro akakodzera kumazera ese uye seGoogle Kumba / Nest zvishandiso zvine simba reGoogle Tsvaga kumashure kwavo, ungangoda kusefa zvemukati kuti uve nechokwadi chekuti chero vevanhu vadiki mumba mako havaone kana kunzwa zvinhu zvaunopa handidi kuti vadaro.
Kune avo vanoda nguva kubva paGoogle Mubatsiri, unogona kuronga nguva yekuzorora. Izvo zvakare zvinokwanisika kudzima mama maikorofoni pane ese Google Kumba / Nest zvishandiso kuti iwe ugone kushandisa iyo sarudzo futi.
Ipa yako Google Kumba / Nest chishandiso zita idzva
Vhura iyo Google Home app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tinya pane Google Kumba / Nest chishandiso chaunoda kutumidza zita> Dzvanya iyo Zvirongwa cog mukona yekurudyi kona> Dzvanya pazita uye uchichinje icho chii unoda.
Webhusaiti ichavhura nezvose zvigadzirwa zveGoogle Kumba / Nest (uye Mubatsiri pafoni yako) zvakanyorwa. Iwe unogona kugadzirisa nezuva uye nguva, kutamba kumashure chaizvo izvo Kumba / Nest zvishandiso zvavakanzwa, tora ruzivo, uye vadzime.
Kuti uwane zvakanakisa kubva kuGoogle Kumba / Nest zvishandiso, uchishandisa zvimwe zvigadzirwa zveGoogle zvinopa chiitiko chakanakisa. Midzi neNest zvishandiso zvakagadzirirwa kushanda nemichero vanhu vazhinji vanowanzoshandisa, senge Google Calendar uye Gmail.
Kana ukabatanidzwa neGoogle Kumba / Nest zvishandiso, unogona kuita Mubatsiri mubatsiri wechokwadi wega. Iyo inogona kutarisa yako purogiramu, set zviyeuchidzo, wedzera zvinhu kune ako ezvitoro zvinyorwa, uye nezvimwe, zvese zvine yakapusa izwi rairo. Ichatodhonza kuchengetedza uye ruzivo rwekubhururuka kubva kuemail yako semuenzaniso.
Google Kumba uye Nest zvishandiso zviri chaizvo Google.com. Unoda kutsvaga chitoro chako chepedyo? Unoda kushandura maununisi kuita makapu? Unoda kuziva kuti Teresa May kana Donald Trump vane makore mangani? Unomboshamisika kuti guta guru reIndia chii? Google Kumba uye Nest zvishandiso zvinogona kuve mubatsiri wako uye kumisikidza kugadzwa, asi zvakare zvakapetwa seinjini yekutsvaga.
Vhura iyo Google Kumba app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe rweapp> Tinya pane yako mbiri mukona yepamusoro kurudyi> Masisitimu emubatsiri> Dhura pasi kuenda kuKuenderera Nhaurirano> Tungamira Kukurukurirana Kunoenderera kana kudzima.
Vhura iyo Google Home app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tinya pane iyo icon icon mukona yekurudyi kona> Mubatsiri Zvirongwa> Bhura pasi 'Iwe'> Tapira pane 'Yako Nzvimbo' tab> Wedzera imba kero / Wedzera kero yebasa.
Vhura iyo Google Kumba app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tinya pane iyo icon icon iri kumusoro kurudyi> Tapira paMubatsiri Zvirongwa> Bhururuka pasi kune Kubhadhara> Wedzera ruzivo rwekubhadhara, kero yekuendesa uye sarudza marongero ekutenga ekutenga. .
Vhura iyo Google Kumba app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tinya pane icon icon mukona yepamusoro kurudyi> Mubatsiri Zvirongwa> Tapira pa 'Iwe' tab> Nickname> Chinja chaunoda Mubatsiri kuti akushevedze. . Unogona kunyange kutarisa kuti rinodudza icho zvakanaka uye kana zvisiri, unogona kuchiperetera kunze.
Vhura iyo Google Kumba app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tinya pane iyo icon icon mukona yepamusoro kurudyi> Mubatsiri Zvirongwa> Tapira pa 'Iwe' tebhu> Mamiriro ekunze> Sarudza Fahrenheit kana Celsius.
Vhura iyo Google Home app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tinya pane iyo icon icon mukona yepamusoro kurudyi> Mubatsiri Zvirongwa> Bhura pasi kuIzwi Match> Tevera mirairo. Kana iwe uine Nest Hub Max, iwe unogona zvakare kuita Face Match, iri pamusoro peVoice Match mune iyo rondedzero sezvazviri kuronga alfabheti.
Vhura iyo Google Home app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tinya pane iyo icon icon mukona yepamusoro kurudyi> Mubatsiri Zvirongwa> Karenda> Default Makarenda.
Maitiro ekusetesa izwi kudana kweGoogle Kumba / Nest zvishandiso
Iwe unogona kutora Google Mubatsiri kuti afone paGoogle Kumba / Nest zvishandiso, asi mafoni kune emergency mabasa haawanikwe kune vese vanopa.
Vhura iyo Google Home app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe kwechiratidziro> Tinya pane iyo icon icon mukona yepamusoro kurudyi> Mubatsiri Zvirongwa> Izwi uye Vhidhiyo Mafoni> Tevedzera rairo.
Google Kumba / Nest zvishandiso zvinogona kukuudza nezve zuva rako, senge khalenda yako, mangwanani kufamba kwetraffic, mamiriro ekunze, uye chero zviyeuchidzo. Iwe unogona zvakare kugadzirisa chirevo chako kuti ubvise zvimwe zvinhu, senge mamiriro ekunze. Chirevo ichi chinopedzisa nemusangano wenhau.
Ita kuti Google irangarire pawakasiya chimwe chinhu
Kana iwe ukaudza Google kuti wasiya makiyi ako pachiredzo mukicheni, kana pasipoti yako mudhirowa repamusoro, ichayeuka kwenguva inotevera yaunobvunza.
Zvese iwe zvunofanirwa kuita kutaura kuti, "Hei Google, pasipoti yangu iri mudhirowa repamusoro" uye wobvunza "Hei Google, pasipoti yangu iripi".
Kuti uone uye nekugadzirisa yako yekutenga zvinyorwa, vhura iyo Google Kumba app> Dzvanya paImba tebhu muzasi kuruboshwe rwechidzitiro> Tinya pane iyo icon icon mukona yekurudyi kona> Mubatsiri Zvirongwa> Shopping Chinyorwa.
Rondedzero yekutenga inogona kungosanganisirwa neyekutanga account accounter asi iwe unogona kuwedzera vabatsiri kuti vagone kuiwanawo.
Hausi kuwana foni yako here? Google Kumba / Nest zvishandiso zvinogona kutsvaga chako chishandiso uye kune yechizvarwa rutsigiro rwemidziyo yeApple. Zvese zviri zviviri Kumba / Nest chishandiso nefoni yako zvinofanirwa kunge zviri paakaundi yeGoogle account, mushure meizvozvo unogona kuti "Hei Google, ridza nhare yangu" kana "Hei Google, tsvaga foni yangu".
Kune vashandisi veIOS, iwe unozofanirwa kubatanidza foni yako nebasa rakanzi IFTTT. Iwe unozofanirwa kusaina kune yemahara IFTTT account, mushure meizvozvo kana iwe shandisa iyi yekubheka kana applet sekudanwa kwavanoitwa, unogona kufona nhamba yako kubva kuGoogle Kumba / Nest mudziyo paunoti "Ok Google, tsvaga foni yangu".
Izvo zvinokwanisika kuti uwane Google Mubatsiri kuti aite zvinhu zvakawanda nemirairo imwe chete. Semuenzaniso, "Ok Google, nguva yekurara" kana "Ok Google, husiku hwakanaka" inogona kukuudza mamiriro ekunze ezuva rinotevera, bvunza kuti inguvai yekumisikidza aramu, gadzirisa mwenje, mapuregi nezvimwe, pamwe nekukiya masuo ako (kana uine zvishandiso zvinoenderana).
Kuti ugadzirire maitiro, vhura iyo Google Kumba app> tinya pane Kumba tebhu muzasi kuruboshwe> Tapira paRoutines icon> Sarudza imwe yemaitiro uye piki / tambanudza mabhokisi ari mukati maro.
Kana iwe usingakwanise kuona maitiro enzira: Vhura iyo Google Kumba app> Vimba pane Kumba tebhu muzasi kuruboshwe> Tinya pane iyo icon icon kumusoro kumusoro kurudyi> Mubatsiri Zvirongwa> Maitiro.
Google Kumba / Nest matipi evaraidzo uye manomano
Imba yeGoogle inogona kuridza mimhanzi kubva kunzvimbo dzinoverengeka, senge Spotify, Deezer, Apple Music, kana YouTube Music. Zvisingashamisi, hazvishande neAmazon Music.
Vhura iyo Google Home app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe rweGoogle Kumba app> Dzvanya pane "+" icon kumusoro> Dzvanya paMimhanzi pasi peAdd Services chikamu> Sarudza kubva pane chinyorwa uye uteedzere mirairo.
Kuti ugadzire chako sosi sosi, tungamira kuImba tebhu yeiyo Google Kumba app> Dzvanya iyo icon icon mune yepamusoro kurudyi> Mubatsiri Zvirongwa> Tapira Mumhanzi> Sarudza iyo yakabatana sevhisi yaunoda kushandisa seyakanyanya sosi yemumhanzi.
Midziyo yeGoogle Kumba inoshandawo nemasevhisi akasiyana siyana, kusanganisira YouTube, Netflix, Disney + uye All4.
Vhura iyo Google Home app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe rweGoogle Imba app> Dzvanya pane "+" icon kumusoro> Dzvanya paVhidhiyo pasi peAdd Services chikamu> Sarudza kubva pane chinyorwa uye uteedzere mirairo.
Kana uine Google Chromecast, unogona kukumbira Google Kumba / Nest zvishandiso kuti utambe mafirimu eNetflix, TV show kana YouTube mavhidhiyo paTV yako. Ehezve, kana iwe uine iyo Nest Hub kana Nest Hub Max, iwe unozokwanisa kutamba mamwe eaya masevhisi pane iyo Hub's skrini pachayo futi kunyangwe kana iwo maonesheni ari madiki zvakanyanya.
Vhura iyo Google Home app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kurudyi kweapp> Tora pikicha yeprofile mukona yepamusoro yekurudyi> Mubatsiri Zvirongwa> Enda kuTV uye masipika> Dhinda chikwangwani "+" mukona yepazasi kurudyi yechidzitiro. Iyo Google Home app ichatsvaga maTV-anotsigirwa maTV pane imwecheteyo Wi-Fi network seGoogle Imba yako.
Iwe unofanirwa kubatanidza yechitatu-bato masevhisi, seNetflix, kuakaundi yako yeGoogle uchishandisa iyo Google Kumba app. Mushure mekuita izvi, unogona kungotaura zvinhu zvakaita sekuti "Ok Google, tamba Imba Yemota kubva kuNetflix paTV". Iwe unogona zvakare kushandisa Google Kumba uye Nest zvishandiso kumbomira kutamba kana kudzorera kumashure kweminiti kune chimwe chinhu chaungave wakarasikirwa nacho.
Vhura iyo Google Kumba app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe rweapp> Tinya pane Zvirongwa> Tinya pane icon icon mukona yekurudyi kona> Mubatsiri Zvirongwa> Dzvanya paVhidhiyo neMifananidzo> Toggle Google Mifananidzo yakavharwa kana kudzimwa.
Zvese iwe zvunofanirwa kuita kuti unzwe podcasts kubvunza. Iti "Ok Google, Tamba Hupenyu Huno hweAmerica" ​​kuti unzwe chikamu chazvino kwazvo chechiratidziro. Kana iwe uchifanira kumbomira, nguva inotevera paunobvunza iyo podcast, yako Google Kumba / Nest chishandiso chinotora kwawakasiya.
Google Cast yakavakwa yakananga muiyo Chrome browser. Nekudaro, kana iwe ukabaya bhatani rekukanda mukona yeChannel, unogona kutsvaga yako Kumba / Nest chishandiso (s), sarudza icho, uye wozokanda odhiyo kubva pakombuta yako kuenda kune yako Google Kumba / Nest chishandiso.
Google Kumba / Nest ruzivo matipi uye manomano
Vhura iyo Google Home app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe kweiyo Google Kumba app> Tinya pane iyo icon icon kumusoro kumusoro> Mubatsiri Zvirongwa> Masheya.
Iwe unogona kuwedzera ako aunoda masheya kune yekutarisa runyorwa kuti uwane nekukurumidza kwavari. Kune bhawa rekutsvaga kumusoro kana iwe uchiziva zvauri kutsvaga, pamwe nemusika wemuno, musika wepasirese uye musika pfupiso tabo, ese ayo anopa mazano.
Iti "Ok Google, teerera kune nhau" uye yako Google Kumba / Nest zvishandiso zvinodzima nhau kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana. Iwe unogona kushandura izvo zvitubu zvaunoda kuti nhau dziuye kubva, pamwe neodha.
Vhura iyo Google Home app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe rweGoogle Kumba app> Tapira pane iyo icon icon kumusoro kumusoro> Masisitimu emubatsiri> Nhau.
Maitiro ekugadzirisa ako ekurara, kurovedza muviri uye data rezvehutano
Imba yeGoogle neNest zvipikirwa zvinoenderana nemamwe masevhisi, saFitbit. Kana iwe uchibatanidza yako Fitbit account kuGoogle Imba semuenzaniso, unogona ipapo kukumbira yako Google Kumba kana Nest zvishandiso kuti vakuudze iwe kuti wakarara sei.
Vhura iyo Google Home app> Dzvanya paImba yepamba muzasi kuruboshwe rweGoogle Kumba app> Tapira pane iyo icon icon kumusoro kumusoro> Mubatsiri maseteni> Wellness> Sarudza izvo iwe zvaungade kubata> Batanidza account yako.
Google Kumba / Nest zvishandiso zvinogona kudzora internet-yakabatana michina yakatenderedza imba yako, kusanganisira mwenje mabhuru kubva Philips Hue, Hive uye Ikea, kamera kubva dendere uye Netatmo, plugs kubva kuTP-link uye Wemo, thermostats kubva kuNest, Honeywell, Tado uye mukoko, nezvimwe zvakawanda.
Dzvanya paTabhu tab muzasi kuruboshwe kweiyo Google Kumba app> Dzvanya pane Wedzera icon kumusoro> Tapira paGadza mudziyo pasi pe Wedzera kuImba chikamu kumusoro> Sarudza iyo 'Inoshanda neGoogle'> Tsvaga iyo mugadziri wechigadzirwa chako uye uteedzere rairo.
Iwe unogona zvakare kuwana rondedzero yemidziyo yako uye kwavari ivo kuburikidza neImba yepamba muzasi kuruboshwe rweImba app> Mbiri icon mune yepamusoro kurudyi> Masisitimu emubatsiri> Kumba kudzora.
Nest Audio matipi uye manomano
Maitiro ekugadzirisa fekitori Nest Audio
Kugadzira fekitori Nest Audio mutauri, tanga wabvisa maikorofoni kuseri kweNest Audio mutauri. Iwe unozofanirwa kudzvanya uye kubatisisa pamusoro pemukurukuri pakati nepakati peasekondi gumi. Mushure memasekondi mashanu, mutauri anokuudza kuti wave kuda kuigadzirisa.
Maitiro ekugadzirisazve Nest Audio
Iwe haufanire kunyatso gadzira fekitori iyo Nest Audio kuti uipe iko kukanda zvishoma kana isiri kuita izvo zvainofanirwa kuita. Google yakavaka reboot sarudzo muGoogle Home app.
Kudzima maikorofoni kuNest Audio, chinja switch irikumushure kwechigadzirwa kuti orenji iratidze. Maikorofoni ikozvino yadzimwa uye haisi kuzoteerera mazwi emuka.
Maitiro ekushandura vhoriyamu kumusoro kana pasi paNest Audio
Iyo Nest Audio mutauri ine yekubata zvekubata kumusoro kwekurudyi uye kuruboshwe makona. Tinya kuruboshwe kurudyi kuti udzikise vhoriyamu uye yekurudyi kuti ukwire kumusoro.
Maitiro ekumisa alarm kana timer paNest Audio
Kuti umise alarm yekurira kana timer paNest Audio, unogona kuti "Mira" kana unogona kubata pakati peye Nest Audio mutauri kumusoro.
Kutamba, kumbomira, kumisa midhiya kana kupedza kufona paNest Audio
Kutamba, kumbomira kana kumisa midhiya, pamwe nekumisa kufona kwazvino paNest Audio, tinya pakati peye Nest Audio mutauri kumusoro.
Tinya pane iwo matabvu kumusoro kwechiratidziro kana uri muamo mode kuti uone uye kudzora ako akabatana smart dzimba zvishandiso, pamwe nekuona zuva rako, media media, manejimendi ekutaurisa uye nekutsvaga kutonga.
Mashandisiro ekurara Kunzwa
Yechipiri-gen Nest Hub inoratidza kurara kwekutevera sechinhu chitsva. Iwe unozokokwa kumisikidza chimiro kumusoro pamwe nekubatanidza yako Nest Hub kekutanga. Maitiro akareruka anoda calibration, saka zvipe maminetsi mashoma kuti zvinhu zvese zvigadziriswe.
Kurara Kunzwa kuchaona kufamba kwako kuburikidza nehusiku uye ndokupa zvinongedzo kune ako marara maitiro uye mamiriro, nemhinduro yekuti ungaita sei zvinhu zviri nani mushure mevhiki rekurara. Iwe zvakare uchave nesarudzo yekufananidza data kuGoogle Fit, kuti ugone kutarisa iwo matanho pafoni yako.
Chii chaunoita kana imwe gadget ikamira kushanda? Unoitangazve, kana "kuitazve". Google yakaisa izvi muImba app uye inoshanda kune ese maGoogle Home zvishandiso, sezvatataura pamusoro.
Google Nest Hub (2021) ongororo: Zviroto zvinotapira zvinoitwa neizvi